အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း သြဂုတ် ၂၀၁၄ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း သြဂုတ် ၂၀၁၄
အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း သြဂုတ် ၂၀၁၄
Posted by kai on Aug 8, 2014 in Editor's Notes, Myanmar Gazette | 24 comments
IBM stuffs 16 million neuron chips into binary ‘frog’ brain
IBM researchers developing chips that mimic the brains of mortals say they’ve createda4,096-core processor that simulatesamillion neurons.
The SyNAPSE silicon, fabricated by Samsung usinga28nm process, has 5.4 billion CMOS transistor gates, consumes 70mW, and usesaprocessor architecture completely unlike today’s CPUs.
That’s two orders of magnitude down from what DARPA describes asa“human-level design”, as you can see from this slide. Today, the technology represents 16 million neurons as opposed to the roughly 100 billion inhabiting each of our grey matter.
DARPA’s SyNAPSE timeline from 2011 … click to enlarge
“16 million neurons is roughly the scale ofafrog brain,” Prof Furber quipped. “So, the IBM board may be able to catchafly for its dinner.”
US Secretary of State’s message to Myanmar leaders – Huffington Post
Many hail the Obama administration’s engagement policy. In his speech to graduates of the West Point military academy on May 28, 2014, Obama claimed reforms in Myanmar asasuccess for U.S. foreign policy.
However, Obama’s interpretation of diplomatic success is not pleasantly received in the U.S. Congress. Citingagrowing list of human rights violations, the Chairman of the House Foreign Affairs Committee Ed Royce on July 9, 2014 called forarange of new punitive measures, including visa bans, an end to U.S.-Myanmar military cooperation, andaconsideration of re-imposing economic sanctions.
ဘယ် စမ်းသပ်ချက် ဖြစ်ဖြစ် ဖားကနေ စတာပဲကိုးးး
(မှတ်ချက် – ဟို ဖားသက်ပြင်း မပါ)
ခု ဖားကိစ္စတွေ ခေတ်စားလာပြီ ဆိုတော့ ဖားတဲ့ ပို့(စ) အဲလေ ဖားပို့(စ) လေး ရေးအူးမှ။
အစမ်းသပ်ခံ ဖား အရှုံးး ~~~~~~~~~
အားလုံးနဲ့ နှိုင်းယှဉ် ~~~~~~~~
တို့ ကတော့ ဂတုံးးးး~~~~~~~
⏩ဆရာမကြီး ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်၏ အကြောက်တရား⏪
ကျွန်တော်တို့ မန္တလေး ဆေးကျောင်းဆင်းတွေ ကျောင်းသား ဘဝက စပြီး ပင်စင်ယူပြီးသည်အထိ ကြောက်ချစ်ရိုသေရတဲ့ မာမီကြီး သို့မဟုတ် ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်ကို တပည့်တွေ တသသ ဖြစ်ရတုံး။ သူ့အကြောင်း တဖွဖွ ပြောရတုံး။သူ့ရဲ့ ထက်မြက်မှုတွေ၊ တော်တည့်ဖြောင့်မှန်မှု တွေ၊ ဟုတ်မှန်ရာကို ဘယ်သူ့မျက်နှာမှ မထောက်ဘဲ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပြောဆိုတင်ပြမှုတွေ၊ တပည့်တွေရဲ့ ရှေ့လမ်းခရီးအတွက် ကြောင့်ကြစိုက်မှုတွေ၊ ဘဝတူ ဆရာဝန် အိုကြီးအိုမတွေရဲ့ဘဝနဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အင်တိုက်အားတိုက် လုပ်ဆောင်မှုတွေ။ ပြောလို့ရယ် ဘယ်မကုန်။ နေသူရိန်က မကြောက်တရား ဆိုတာ ဟောခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်က ဆရာမကြီးရဲ့ အကြောက်တရား ဆိုတာ ပြောချင်တယ်။
တစ်ခါက နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ မန္တလေးကို တိုင်းခန်းလှည့်လည်လာသတဲ့။ မဆလပါတီ ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဦးနေဝင်း။ မန္တလေးက ပညာရှင်တွေနဲ့ တွေ့ချင်ပါတယ်ဆိုလို့ နန်းတွင်း တပ်ဧည့်ရိပ်သာမှာ တွေ့ဆုံပွဲတစ်ခု တိုင်းမှူးက စီစဉ်ပေးရတယ်။ ဦးနေဝင်း ဆိုတာ လူတွေ မော်လို့မှ မကြည့်ရဲလောက်အောင် ဖုန်းမီးနေလ ထွန်းပနေချိန်။ သူ့နာမည်ကိုတောင် လူကြားထဲ ကျယ်ကျယ် မပြောဝံ့ကြ။ နံပါတ်ဝမ်းကြီးလို့ တိုးတိုးတိတ်တိတ် ကြိတ်ခေါ်ရတာ။ ပါမောက္ခချုပ်တွေ ဌာနမှူးတွေ ပညာရှင်တွေအစုံနဲ့ ဥက္ကဋ္ဌကြီး တွေ့ဆုံပွဲ။
ထုံးစံအတိုင်း ဒီလိုတွေ့ဆုံပွဲမှာ ဘယ်သူမှ တုပ်တုပ်လှုပ်ဝံ့တာ မဟုတ်။ ကြည့်တာတောင် ကိုယ့်ရှေ့တည့်တည့်ဘဲ ကြည့်ရဲတာ။ မြင်းတွေ ပါးချပ်တပ်ထား သလို။ ဥက္ကဋ္ဌကြီး ပြောသမျှ မှန်ပါ့ လုပ်ရတာ။ သူ့လေသူမိရင်း ဥက္ကဋ္ဌကြီး ငါ့မြင်းငါစိုင်း လိုက်တာ ပညာရှင်တွေရဲ့ ခြေချောင်းလေးတွေပေါ် တက်နင်းတာတွေ၊ ဖနောင့်နဲ့ ကြိတ်တာတွေ ဖြစ်ကုန်ရော။ “ခင်ဗျားတို့ ပညာရှင်တွေ မန္တလေးလို ယဉ်ကျေးမှု အချက်အချာ မြို့ကြီး ကံကောင်း ထောက်မစွာ ရောက်နေရက်ကနဲ့ ကိုယ့် အဝန်းအဝိုင်း အပြင်မထွက်ဘဲ မလေ့လာဘဲ နေတာ ညံ့ရာမကျဘူးလား” ဘာညာဘာညာ ပေါ့ဗျာ။ ပညာရှင်တွေကဘဲ . . ဘာရလိမ့်မလဲ . . သိတယ် မဟုတ်လား . . အားလုံး ပြုံးပြုံးလေး အောင့်ခံနေလိုက်ကြတာပ။ သူက ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဆိုတော့ သူ့တာဝန်က ပြောဖို့။ ပညာရှင်တွေရဲ့တာဝန်က ဥက္ကဋ္ဌကြီး ပြောတာ နားထောင်ဖို့။ အဆင်ကိုပြေလို့။
အဆင်မပြေတာက ဆရာမကြီး ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်။ သူက နံပါတ်ဝမ်းကြီး ထင်ရာ တုပ်နေတာ အစာမကြေဘူး။ အားလုံး ငုပ်တုပ် ထိုင်ခံနေတာလည်း သူမကြိုက်ဘူး။ သူမနေနိုင်တာနဲ့ လွတ်ခနဲ ဝင်ပြောလိုက်တယ်။
“ကျွန်မတို့ မန္တလေး ရောက်ကတည်းက ဆေးရုံနဲ့ ဆေးကျောင်းထဲတင် ထိုင်မနေပါဘူး။ မန္တလေး မှာ ကြည့်သင့် ကြည့်ထိုက်တဲ့ နေရာတွေ ရောက်အောင်သွားတယ်။ တွေ့သင့် တွေ့ထိုက်တဲ့ လူတွေနဲ့ တွေ့ပါတယ်။ စကားပြောပါတယ်။ တမ္ပဝတီကို မကြာ မကြာ ရောက်ပါတယ်။”
ဥက္ကဋ္ဌကြီး အံ့သြတကြီး လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ ဘယ်သူများလဲပေါ့။ ငယ်ငယ် ချောချော ထက်ထက်မြက်မြက် ရှိပုံရတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး။ သူ “ဖျား”သွားပုံရတယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း သူပြောသမျှ ငုံ့ခံမနေဘဲ နှုတ်တုံ့လှန်တဲ့ ဒီအမျိုးသမီး ကို စိတ်ဝင်စားသွား ပုံရတယ်။ ဒီမှာတင် ဆရာမကြီးနဲ့ ဥက္ကဋ္ဌကြီး စကားလက်ဆုံကျသွားပါ သတဲ့။ ဂျပန်ခေတ် အတွေ့အကြုံတွေ ရယ်ရယ်မောမော ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ အဆင့်ထိ ရောက်သွားပါသတဲ့။ တွေ့ဆုံပွဲ တက်ရောက်လာတဲ့ ကျန်တဲ့ ယောက်ျားသားတွေ တုပ်တုပ်မှ မလှုပ် ငုပ်တုပ်။
ဆရာမကြီး အငြိမ်းစား ယူခါနီး နောက်ဆုံး စစ်ဆေးရတဲ့ စာမေးပွဲမှာ ကြုံရတာကလည်း မှတ်သားလောက်တယ်။ နောက်ဆုံးနှစ် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုတဲ့ တပည့်တွေထဲမှာ တိုင်းကောင်စီ အရာရှိကြီးတစ်ဦးရဲ့ ရင်သွေးတစ်ဦးပါလေရဲ့။ သူကလေးက ကျန်တဲ့ဘာသာတွေ အောင်ပြီး ဆရာမကြီးတို့ စစ်ဆေးရတဲ့ ဘာသာရပ်မှာ လာကျနေတာ။ ဘယ့်နှယ် လုပ်ကြမတုံး။ သတင်းအစအန ရသွားတဲ့ ကြားပွဲစားတွေက ဆရာငယ်တွေ/ဆရာလတ်တွေကို အစ်အောက်မေးကြ။ မသိမသာ ဖိအားပေးဖို့ ကြိုးစားကြ။ ကာယကံရှင်ဖက်က ဘယ်လိုသဘောထားတယ် မသိ။ ဆရာမကြီးဖက်ကတော့ စိတ်ရှင်းလိုက်သမှ။ စာမေးပွဲတစ်ခုရဲ့ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်လမ်းကြောင်း အတိုင်း သွားစေ။
“ဒီကလေးကို အအောင်ပေးရအောင်က သူ့ကို ငါချထားတာ မဟုတ်ဘူး။ ငါချထား ရင်လည်း ချသင့်လို့ ချထားတာဘဲ။ အအောင်ပေးစရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ အခုဟာက တခြား စာစစ်တွေက ချထားတာ။ သူတို့လည်း အကြောင်းမဲ့ လုပ်ထားတာ မဟုတ်ဘူး။ ငါက ကြားထဲက ဝင်စွက်ဖက်စရာ ဘာအကြောင်း မရှိဘူး။”
သူ့အိမ်ကို ဖုံးတွေ ဝင်လာမစဲ တသဲသဲ။ လူကိုယ်တိုင်တော့ ဘယ်သူမှ လာမတွေ့ရဲဘူး။ စိတ်ကူးထဲတောင် ထည့်ရဲမယ်မထင်။ အဲဒီအချိန် လာတဲ့ ဖုံးမှန်သမျှ ဆရာမကြီး ကိုယ်တိုင် မကိုင်တော့ဘူး။ အိမ်ကလူ တစ်ဦးဦး ကိုင်စေတယ်။ စာမေးပွဲနဲ့ ပတ်သက်တယ် ဆိုရင် ဆရာမကြီးဆီ သတင်း ဆက်ပို့စရာမလို။ ဖုံးပွဲစားတွေလည်း နောက်ဆုံးတော့ လက်လျှော့သွားပုံရတယ်။ အောင်စာရင်းမှာ အဲဒီ စာသင်သား နာမည် ပါမလာဘူး။
ဆရာမကြီးကြောက်တဲ့ ဆရာ ATBT
နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲကိုရော ဒေသဆိုင်ရာ အကြီးအကဲကိုရော ဒီလို တုံ့ပြန်ဝံ့ တုံ့ပြန်ရဲတဲ့ ဆရာမကြီးတစ်ယောက် လောကကြီးထဲ သူကြောက်စရာလူ မရှိလောက်ဘူးလို့ ခင်ဗျားတို့ ထင်ကြပေလိမ့်မယ်။ ဒီပွဲ ခင်ဗျားတို့ လွဲတယ်။ ဆရာမကြီး ကြောက်ရတဲ့လူ လောကကြီး ရှိသေးသဗျ။ ကျွန်တော်သိသလောက် နှစ်ယောက်ရှိတယ်။
ဆရာ ATBT လို့ လူသိများတဲ့ ဆရာကြီး ဒေါက်တာ ဦးအောင်သန်းဘတူက ဆရာမကြီး ကြောက်ရတဲ့သူ တစ်ဦး။ ဆရာက မာမီ့ထက် ငယ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ငယ် ဘဝက မာမီ့လက်အောက်မှာတောင် အလုပ်လုပ် သွားဖူးသေးတယ်။ ဘာလုပ်လုပ် စနစ်တကျ သပ်သပ်ရပ်ရပ် လုပ်သူ။ အင်မတန် စူးစိုက်အားကောင်းသူ။ ဆေးလောကမှာ ကျင်လည်ရင်း ဆေးပညာ ပါမောက္ခဘဝကနေ မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးပညာ သုတေသန ဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အထိ ဖြစ်တယ်။ဒေသဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ကြီးမှာ ဆက်လုပ်တယ်။ အငြိမ်းစားယူပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးပညာရှင် အသင်းမှာ ဝင်လုပ်တော့ ဆရာမကြီးနဲ့ ဆုံရပြန်တယ်။
အလုပ်အတူတူ လုပ်ကြရင်း ပြဿနာတွေ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းစရာတွေ ပေါ်လို့ ညှိကြနှိုင်းကြရတဲ့အခါ ကိစ္စ တော်တော်များများမှာ မာမီကြီးနဲ့ ဆရာနဲ့ ထပ်တူထပ်မျှ သဘောချင်း တိုက်ဆိုင်တာ တွေ့ရသတဲ့။ တခါတလေ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ကြိုတင် တိုင်ပင်ထားတာ မဟုတ်ဘဲ ဖြစ်နိုင်တဲ့ပြဿနာ (issues) နဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဖြေတွေ (solutions) အိမ်မှာ ချရေးခဲ့ပြီး အစည်းအဝေး လာသတဲ့။ အစည်းအဝေး ရောက်ခါမှ တစ်ဦး မှတ်စု တစ်ဦး တိုက်ကြည့်တဲ့ အခါ ထပ်တူနီးပါး တူနေတာ တွေ့ရတတ်သတဲ့။ စကားလုံး ရွေးချယ်ပုံကအစ။
“မောင်အောင်ကြီးနှယ်ကွယ်။ သူ့ notes နဲ့ ကိုယ့် notes တိုက်ကြည့်ရင် တခါတလေ ထပ်တူနီးပါးကွဲ့။ wording တောင် တူနေလို့ ကိုယ့်မှာ အံ့သြရသေးတယ်။ သူက တကယ့် တကယ်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ intellectual soulmate ဘဲ။”
ဒါဖြင့် မာမီကြီးက ဆရာ ATBT ကို ဘာအကြောင်းကြောင့် ကြောက်နေရသတုံး။ ဒါကဒီလို။ project တစ်ခုခု/အလုပ်တစ်ခုခု အတူတူ တွဲလုပ်ကြပြီ ဆိုရင် ဆရာက လုပ်ငန်းအစဉ် (timeline) စနစ်တကျ ဆွဲတယ်။ အဲဒီအတိုင်း အချိန်မီ (deadline) ရောက်အောင် သွားတယ်။ သူ့ roadmap က အမြဲလိုလို ကွက်တိ ဝင်အောင်သွားတဲ့ လမ်းညွှန်မြေပုံ။ အလို အပို မရှိ။ ရှိရင်လည်း လုံလောက်တဲ့ အကြောင်းပြချက် ရှိတယ်။ သူက အင်မတန် professional ပီသသူ။
“ငါကတော့ အလုပ်တွေကများ။ စိတ်တွေကများတော့ သူခိုင်းတာ တခါတလေ အချိန်မီ မပြီးတာ များတယ်။ မင်းသိတဲ့အတိုင်း ငါ့ လက်ထဲမှာ project တွေက ဆယ်ခုလောက် တစ်ပြိုင်တည်း လုပ်နေရတာ။ ဒါကို အောင်သန်းကလည်း သိတယ်။ ဒါပေတဲ့ သူ့မြင်ရင် ‘မမ ကျွန်တော် ခိုင်းထားတာ ပြီးပလား’ လို့ မေးမှာ ငါ့မှာ ကြောက်နေရတာ” လို့ မာမီကြီး ထုတ်ပြောခါမှ ဒီလောကကြီးထဲ ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင် ကြောက်တဲ့သူ ရှိသေးကြောင်း ကျွန်တော် သိလိုက်ရပါတော့တယ်။
ဆရာမကြီး ကြောက်ရတဲ့ နောက်တစ်ဦးက မန္တလေးက ခင်ဗျ။ ဆရာမကြီးရဲ့ တပည့် ရင်းချာတစ်ဦး။ ဆရာမကြီး အလွန်ချစ်ခင်သူတွေထဲက တစ်ယောက်။ ဆရာမကြီး ကို လည်း အပြန်အလှန် ချစ်ခင်လေးစားသူ။ ဒေါက်တာ ဦးတင်ထွဋ်။ ဆေးပညာ ပါမောက္ခ။ ကျွန်တော့် ဆရာ။
ဆရာက အလွန်ရိုး အလွန်အေး။ ကျွန်တော်တို့ တတိယနှစ် ဆေးရုံလက်တွေ့ စဆင်း ကတည်းက ဆရာတော်ခဲ့တာ။ နောက်ဆုံးနှစ်ထိ။ အလုပ်သင်ဆရာဝန် ဘဝထိ။ ဆရာ ဦးခင်မောင်ဝင်း ဆရာ ဦးသန်းထွန်း မမ ဒေါ်သန်းရင်မာ မမ ဒေါ်ခင်မေစန်း မမ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့်တို့နဲ့ အတူ ဆေးပညာဌာနမှာ ဆရာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းခဲ့တာ။ နောင် ကျွန်တော် ဆေးပညာဌာနမှာ တာဝန်ယူရတော့ ဆရာနဲ့ ပြန်ဆုံစည်းရတယ်။ ဆရာက ရိုးမြဲရိုး အေးမြဲအေး။ ဆရာနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး ထဲထဲဝင်ဝင် အလုပ် အတူတူ လုပ်ခါမှ ဆရာ့ရဲ့ အခြား တစ်ဖက်က စာမျက်နှာကို ဖတ်မိတော့တယ်။ ဆရာက မြန်မာသီချင်းကြီး သီချင်းခံ ကြိုက်သူ။ ကွန်ပြူတာ ကျွမ်းသူ။ မအိ်ပ်ဘဲ နေနိုင်သူ။
ကျွန်တော်တို့ ဆေးပညာဌာနမှာ အမှတ်စာရင်းသွင်းတာအစ ကျောင်းခေါ်ချိန် စာရင်း သွင်းတာအဆုံး အားလုံး ကွန်ပြူတာနဲ့ လွယ်လင့်တကူ တွက်ချက်နိုင်တာတွေ အားလုံးဟာ ဆရာ့အားထုတ်မှု အသီးအပွင့်တွေပါဘဲ။ အဲဒီ ပရိုဂရမ်တွေ ဆွဲနေရရင် သူ့မှာ ပျော်လို့။ ပရိုဂရမ်ကို စမ်းသပ်ရင်း၊ run ရင်း အဆင်မပြေရင် အဖုအထစ်ရှိရင် သူ မအိပ်တော့ဘူး။ ပြဿနာရဲ့ ရင်းမြစ်ကို လိုက်ရှာပြီးပြင်တော့တာ။ ပိုကောင်းတဲ့ စနစ်ကို ရှာတော့တာ။ အလုပ်ဖြစ်ရုံ လုပ်တာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာ ဆရာက ဇွဲနဘဲ ကြီးလှတယ်။ မေးခွန်းရိုက်တဲ့အခါ စာလုံး ပမာဏ၊ စာလုံး အထားအသို၊ သတ်ပုံ၊ သဒ္ဒါ အသုံးအနှုံး၊ စာမျက်နှာ ဖွဲ့စည်းပုံ ဒါတွေကိုလည်း ဆရာက အချိန်ယူပြီး စိစစ်တတ်တယ်။ အထပ်ထပ် အခါခါ ပြန်ပြင်တတ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဌာနက ထုတ်တဲ့ မေးခွန်းတွေမှာ သတ်ပုံမှားတာ သဒ္ဒါမှားတာ တစ်ခါမှ မတွေ့ရဘူးလို့ ရန်ကုန်က ဆရာမကြီးတစ်ဦး ချီးကျူးဖူးတယ်။ ဒါတွေဟာ ဆရာဦးတင်ထွဋ် လက်ရာ။
ဆရာ ဦးတင်ထွဋ်က သူ လုပ်သမျှ ကိစ္စတွေမှာ ဒီလို အသေးစိပ် ဂရုပြုတာ၊ ဒီလို စေ့စေ့စပ်စပ်ရှိတာ ဘာပြဿနာ ရှိသတုံး။ ဒါ ကောင်းတဲ့ ကိစ္စဘဲ။ ဒါပေတဲ့ “ကောင်းတဲ့ကိစ္စ” က “မကောင်းတဲ့ကိစ္စ” ဖြစ်သွားတဲ့ အခါလည်း ရှိရဲ့။ အဲဒါကတော့ စာရင်းတစ်ခုခု/မေးခွန်းတစ်ခုခုကို အချိန်မီ အမြန် ပို့ဖို့ လိုတဲ့ အခါ၊ “အားဂျင်း” လုပ်ရတဲ့အခါမျိုးကျရင် ဆရာနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတာ တော်တော် စိတ်ညစ်ဖို့ ကောင်းတယ်။ သူ စိတ်ကြိုက် မဖြစ်မချင်း သူ့လက်ထဲက ဘာမှ မထွက်တော့ဘူး။ စာမျက်နှာ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ရပြန်တာနဲ့။ စာလုံး size ပြင်ရပြန်တာနဲ့။ သတ်ပုံ ပြန်စစ်ရတာ နဲ့။ ကွန်ပျူတာက spell check လုပ်ပြီးတာ မှန်သော်လည်း တစ်ချို့သော ဆေးပညာ ဝေါဟာရတွေကို ကွန်ပြူတာက သူသိတဲ့ ဝေါဟာရနဲ့ ပြင်အစားထိုးတတ်လို့။ ဥပမာ miliary TB (တစ်ကိုယ်လုံး ပျံ့နှံ့နေတဲ့ တီဘီရောဂါ) လို့ ရေးတာကို ကွန်ပြူတာက military TB လို့ ပြင်ရေးတယ်။ ပိုဆိုးတာက ကျောက်ကပ်ရောင် ရောဂါ တစ်မျိုး nephritic syndrome ရေးတာကို ကွန်ပျူတာက nephrotic syndrome လို့ ပြင်ရေးတဲ့ အခါမျိုး။ ဒီ နှစ်ခုက တူသလိုလို ရှိပေတဲ့ ရောဂါ လက္ခဏာ၊ ကုထုံး၊ ရောဂါ ရဲ့ ရှေ့အလားအလာတွေ တော်တော် ကွာပါတယ်။ ဒီလို မိုင်းကွင်းတွေ သိထားလို့ ဆရာက သေသေချာချာ စိစစ်တာ။ ဒါကို ကျွန်တော် နားလည် သဘောပေါက်ပါတယ်။ ဒါပေတဲ့ သင့်တော်တဲ့ စကားလုံး မရ ရအောင် အချိန် တော်တော်ကြီး ယူပြီး စဉ်းစားတာ၊ စာမျက်နှာ အထားအသိုကို တမေ့တမော လုပ်နေတာကိုတော့ ကျွန်တော် စိတ်ညစ်တယ်။ ဆရာက ဒါမျိုးကို အလွန် အင်မတန် မွေ့လျော်တယ်။ တစ်ခါက ဌာနမှာ ဆရာနဲ့ အတူထိုင်ပြီး မေးခွန်း ထုတ်တာ ညနက် သန်းကောင် တိုင်ပါလေရော။ ကျွန်တော့်မှာ ဇက်ကျိုးလု။
ဆရာ အငြိမ်းစား ယူသွားပြီးနောက်ပိုင်းကာလ ဌာနက သုံးတဲ့ ကွန်ပြူတာ ပရိုဂရမ် တစ်ခုခု ဗွေဖောက်တိုင်း ဆရာ့ကို သတိရတယ်။ ဆရာရှိရင် ဒါမျိုး အလွယ်တကူ fix လုပ်နိုင်မှာ။ အဲ . . . အချိန်လည်း တော်တော်ယူမှာ။ ဆရာမကြီး ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်က သူ စာအုပ်ရေးရင်းတန်းလန်း အကြောင်းအရာ အချက်အလက် တစ်ခုခု သိချင်တဲ့အခါ ဆရာ့ကို လှမ်းလှမ်းပြီး အကူအညီ တောင်းလေ့ရှိတယ်။ ဆရာက ဆရာမကြီး ရှာခိုင်းတဲ့ အချက်အလက်တွေသာမက တစ်ခြား နှီးနွယ်တဲ့ အချက်အလက်တွေကိုပါ ရှာပေး စုစည်းပေးတာ။ ဒါကြောင့်လည်း ဆရာမကြီးက ဆရာ့ကို အားကိုးတာ။ ဒါဆိုရင်လည်း ဆရာမကြီးက ဆရာ့ကို ဘာကြောင့် ကြောက်ရသတုံး။
ဆရာမကြီးက လောလောဆယ် ကျမ်းတစ်စောင်ပေတစ်ဖွဲ့ (The heritage: Myanmar Women through the Ages) ပြုနေတာရှိတယ်။ အဲဒီ ကျမ်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက် တစ်ချို့ကို ဆရာဘဲ ရှာပေးခဲ့တာ။ ဒီအထိက ပြဿနာ မပေါ်သေးဘူး။ အဲဒီစာအုပ်ကို တည်းဖြတ်ဖို့၊ သတ်ပုံသတ်ညွှန်း ပြင်ဖို့၊ စာညွှန်း (index) ဖွဲ့ဖို့ ဆရာ့ကို တာဝန်ပေးမယ်လို့ ဆရာမကြီး ဆုံးဖြတ်လိုက်ကတည်းက ပြဿနာ စတော့တာ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ဆရာမကြီး မွေးနေ့ပွဲ မန္တလေးမှာ လာလုပ်တဲ့အချိန် ဆရာနဲ့ ဆုံပြီး သူ့စာအုပ်ကို တည်းဖြတ်မယ်ပေါ့။ ဆရာမကြီးက ဒီကိစ္စ တစ်ပတ် ဆယ်ရက် အတွင်း ပြီးမြောက်မယ် ထင်ရှာတာ။ တကယ့်တကယ် ဆရာနဲ့ ဆရာမကြီး အတူတူ လုပ်ကြတော့ ဆရာမကြီး ထင်သလို မဟုတ်ချေတကား။
ဆရာက စာမူကို အပြန်ပြန် အလှန်လှန်ကြည့်၊ အထပ်ထပ် အခါခါကြည့်။ ရှေ့နောက် မညီဘူး ထင်ရင် ပြန်စစ် ပြန်ပြင် ပြန်ငြင်း။ ဆရာမကြီးကို ချစ်တဲ့ကြားက၊ ဆရာမကြီး ကို ကြောက်တဲ့ကြားက။
“မောင်အောင်ကြီးရယ်။ မောင်တင်ထွဋ်က တော်ပါတယ်။ အင်မတန် စေ့စပ်တယ်။ ဒါပေတဲ့ သူ့ဟာက စေ့စပ်လွန်းတော့ ငါတို့ အလုပ်က ခရီး မတွင်တော့ဘူးကွဲ့။ ငါ့ စာအုပ် အချိန်မီ ပြီးတော့မယ် မထင်ဘူး။ ငါ သူ့တောင် ကြောက်လာပြီ။”
လို့ ဆရာမကြီး မညည်းစဖူး ညည်းရှာတယ်။ ကျွန်တော် ဘာပြန်ပြောရမှန်း မသိဘူး။ ကျွန်တော့်အတွက်က ဒါမျိုးတွေ ရိုးနေပြီ။ တစ်ခါက ဆရာမကြီး ကျွန်တော်တို့ ဌာနမှာ လုပ်တဲ့ ဆေးလက်တွေ့ပါရဂူ စာမေးပွဲ လာစစ်တယ်။ ပြင်ပစာစစ် အနေနဲ့ လာတာ။ စာမေးပွဲအပြီး ပြင်ပစာစစ် အစီရင်ခံစာ ရေးရတယ်။ ဆရာမကြီး လက်ရေးနဲ့ ရေးတာ ကို ဆရာက ကွန်ပြူတာ စာစီပေးတယ်။ ဆရာမကြီး ရေးတဲ့အထဲက စာတစ်ကြောင်း ကို ဆရာက ဘဝင်မကျဘူး။ အဲဒါကို သူပြင်ချင်တော့ ကျွန်တော့် လာတိုင်ပင်တယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း ဆရာပြောတာ သဘောတူတယ်။ ဒါကို ရိုးတိုးရိပ်တိတ် သိသွားတဲ့ ဌာနမှူးဆရာမကြီးက
“ဟို နှစ်ကောင် ဘာတွေ ကြံစီနေတာလဲ။ မာမီရေးထားတာ ပြင်ဖို့ လုံးဝ လုံးဝ မကြိုးစားနဲ့နော်။ သိရင် မိုးမီးလောင်မယ်။”
လို့ ကျွန်တော်တို့ကို ဝမ်နင်ပေးတယ်။ ဒါပေတဲ့ ဆရာက သူ ဘဝင်မကျတဲ့ စာသားကို လွှတ် ပြင်ချင်နေတာ။ သူ့စိတ်ထဲ ကျလိကျလိ။ နောက်ဆုံး မနေနိုင်တဲ့အဆုံး စာကြောင်း တစ်နေရာမှာ semi-colon လေး ထိုးခံလိုက်တယ်။ စာကြောင်း ချောသွားတယ်။အဓိပ္ပာယ်လည်း မပျက်ဘူး။ စီပြီးသား စာမူ ပြန်ဖတ်တဲ့ ဆရာမကြီး စာဖတ်အပြီးမှာ စာရွက်ပေါ် အသာတကြည် လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ခါမှ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် ရင်ထဲက အလုံးကြီး ကျသွား။ ဆရာ ဦးတင်ထွဋ်က ဒီလိုလူ။
ဟောဒီလောကီမှာ သူဘာကို ကြောက်တာလဲ
လူချင်းအတူတူ ဘယ်သူ့ကိုမှ ကြောက်စိတ်မပြခဲ့တဲ့ ဆရာမကြီး ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင် ဘာကို ကြောက်နေတာပါလိမ့်။ သူ့ နေဝင်ချိန် နီးကပ်လာပြီဆိုတာ ဉာဏ်ကြီးသူပီပီ သူသိသည်။ လက်ထဲမှာ အလုပ်တွေ အများကြီး ကျန်သေးသည်။ လက်ထဲက အလုပ်တွေထက် ခေါင်းထဲက အလုပ်တွေက ပိုများနေ။ ဒါတွေ သူမသေခင် တတ်နိုင်သရွေ့ အပြီးသတ်သွားခဲ့ချင်သည်။ သူ့နောက်ဆုံးနေ့တွေက ဆေးရုံပေါ်မှာ။ နေလို့ထိုင်လို့ နည်းနည်းသက်သာပြီ ဆိုတာနှင့် ကွန်ပြူတာ တောင်းတော့တာပါဘဲ။ သုံးလေးနာရီ ခေါင်းမဖော်တမ်း အလုပ်လုပ်ပြီ။ တစ်ခါက တပည့်တစ်ဦး သူ့ဆီလာလည်သည်။ သူ့အနားကပ်ပြီး နှုတ်ဆက်သည့်တိုင် သူ လှည့်မကြည့်ခဲ့။ အလုပ်ဇောကပ်နေတာရော၊ နားမကြားတာရော။ ဒီလိုနှင့် တပည့် ဖြစ်သူ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် လှည့်ပြန်သွားရသည်။
ဆေးရုံပေါ်မှာနေရင်း၊ ဆေးကုသမှုခံယူရင်း၊ ကိုယ်တွေလက်တွေ ခြေတွေ ဖောသွပ်ရောင်ရမ်းရင်း၊ အမောဖောက်ရင်း၊ အောက်စီဂျင် မပြတ်ရှူရင်း အလုပ်တွေ တရစပ် ကျုံးလုပ်နေသည့် အသက် ၉၀ ကျော် မြန်မာအဖွားအိုတစ်ဦး သင် မြင်ဖူးပါသလား။ လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်သည့် လုပ်နိုင်သည့်အလုပ်တွေကို လုပ်မသွားရမှာ၊ လုပ်နေဆဲ အလုပ်တွေ ဆုံးခန်းတိုင်ပြီးမသွားမှာကို သူ ပူပန်ကြောင့်ကြရှာတာ။ ဆရာမကြီး၏ အကြောက်တရား မြစ်ဖျားခံရာကို ကျွန်တော်မြင်လိုက်ပြီ။
လူ့ဘဝဆိုတာ မပြီးသေးသော ပန်းချီကားတစ်ချပ်ပါဘဲ။ ပန်းချီကားကြီးက ကြီးလွန်းလှ သမို့ မည်သူမျှ ပြီးစီးသွားအောင် မဆွဲနိုင်ခဲ့ကြ။ ကိုယ်ကျရာ ကိုယ်သန်ရာ အခန်းကဏ္ဍကို ပြီးစီးအောင် ကိုယ်စီ ဆွဲနိုင်ခဲ့ရင်ဖြင့် မပြီးသေးသော ပန်းချီကားကြီးထဲ လှပပြည့်စုံသော ပန်းချီကားချပ်လေးတွေ ပေါ်ထွန်းလာပါလိမ့်မည်။ ဆရာမကြီး ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်၏ အကြောက်တရားမျိုးက ထိုပြီးပြည့်စုံသော ပန်းချီကားလေးတွေ ဖန်ဆင်းရာမှာ ကြီးမားသည့် အထောက်အပံ့ ဖြစ်လိမ့်မည် ထင်သည်။ ။
ဆရာမကြီး ဆုံးသွားတာ တိုင်းပြည်အတွက် အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ဆုံးရှုံးမှုလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ သူ့စာအုပ်တွေထဲမှာ လူနာတွေကို အင်မတန်စေတနာထားတာ သိပ်ပေါ်လွင်တယ်။
စိတ်မကောင်းလို့ ဘာမှ ဆက်မပြောတတ်တော့ဘူး။
မြန်မာတွေအသက်ကြီးလာရင်.. ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ..သိကြစေလိုရင်း.. ရည်ရွယ်ရင်းပါ…။
.. ဒါကို ဆရာမကြီး.. လက်တွေ့ပြသွားတယ်လို့…
မှန်လှပါ ခြေတော်ရင်း ဆံခင်းလို့ ခြေတော်စုံ ဆံပုံပါတယ်ဘုရား ဝအောင်လည်း ကျွေးလိုက်ပါ လှအောင်လည်း ဆင်လိုက်ပါ ပြုံး၍လည်း ကန်တော့ခံတော်မူပါ ရယ်၍လည်း ကန်တော့ခံတော်မူပါ ဘုရား
ဒါဆိုနောက်တော်ဆိုင်းက ရွာစားရေ ဒိုးသံနှောစေဗျာ
ဆရာမကြီး အကြောင်း ရေးထားတဲ့ စာလေး ဖတ်ပြီး
ကိုယ့်ဟာကို ညည်း နေမိတာ ကိုတောင် နဲနဲ ရှက်မိသွားတယ်။
ဆရာမကြီး ကို အားကျ လွန်းလိုက် တဲ့ စိတ် က အင်အားဖြစ်လိုက်ပါတယ်။
Cheeseburger in Hydrochloric Acid – Periodic Table of Videos
စိတ်လေတယ် လော်ထရီးရားလေး လာလို့ သွားအားပေးမလို့ဆို
မစားဘူး မစားဘူး ဘာမှ မစားတော့ဘူး အငတ်နေမယ်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ရဲ့..သားအိမ်ရယ်..။ အစာအိမ်ရယ်..။ အစာအိမ်ထဲက..၀မ်းမီး(အက်စစ်)ဆိုတာရယ်.. ဘာမှန်းမကွဲကြတဲ့.. မိလိန္ဒပဥှာထဲက.. အမေးအဖြေလေးတွေသတိရမိလို့ပါ…။
ကိုရီးယားကပါ ၂၄ရက်​​နေ့ Grand opening သူငယ်​ချင်းကစိုင်းစိုင်း​ခေါ်လာမယ်​​ပြောလို့
The company was founded on February 1972 in Tokyo, Japan by Shin Jun Ho,aKorean entrepreneur. Its first franchises opened in Nihonbashi, Ueno, and Yokohama in September of that year.In 1979 the brand was established in Seoul, South Korea. Lotteria later spread throughout East Asia adding locations in China, Myanmar, Taiwan, and Vietnam.
ဂျာပွန်က.. ကိုရီးယန်း-ဂျပန်နိုင်ငံသားပိုင်တာတဲ့ဗျ..။ :K:
သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့ ည ၈နာရီ ၃၀ မိနစ်က ရန်ကုန်မြို့ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်တွင် ဥက္ကဌအား အမေရီကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျွန်ကယ်ရီနှင့် အဖွဲ့ဝင်များလာရောက်တွေ့ဆုံရာ ဥက္ကဌ မှလက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။
အဲဒီအဆုံးအပိုဒ်ကို.. ဖတ်ကြည့်ပြီး.. အင်း..
မဆီ မဆိုင် ဖား တဲ့ ကိစ္စ လေး တစ် ခု ပြောချင်ပါတယ်။
မန္တလေးမြို့မှာ မ ဆ လ ပါ တီ မ၀င်ဘဲ ကြံကြံခံရင်း အခွင့် အရေးတွေစွန့်လွှတ်ခဲ့သူ တစ်ဦးရှိပါတယ်
အောင်လွင်ဦး / ဗွီအိုအေ (မြန်မာပိုင်း)
Myanmar Gazette Aug_Sept 2014
ဒီအစိုးရကို ချဉ်းကပ်လို့မရလို့ နောက်တက်မယ့်သူဖြစ်ဖြစ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချဉ်းကပ်လို့ဖြစ်ဖြစ် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းဟာ အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဘယ်အစိုးရပဲတက်တက် ဒီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းလုပ်ဆောင်တဲ့ အစိုးရဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖြစ်နေရင်တောင် လူထုရဲ့ ဆန့်ကျင်မှုကို ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်…
ကျန်တဲ့သမ္မတလောင်းတွေ အားလုံးဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မဖြစ်ရင် သူရွေးချယ်တဲ့သူပဲ သမ္မတဖြစ်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်းများတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကို မတရားညစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်မှာ ဆူပူအုံကြွမှုတွေဖြစ်မယ်။ ခင်ဗျားတို့လည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလို့ရမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ဒါဟာ လက်ရှိအခြေအနေပဲ။ အဲဒါက သမိုင်းတွေရှိခဲ့တယ်…
ဒီလက်မှတ်ထိုးပွဲ Peace Accord က Show Business ပဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပြည်တွင်းစစ်က ၁၉၄၈ ကတည်းက ၆၆ နှစ်ရှိပြီ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရှည်ကြာဆုံးပြည်တွင်းစစ်။ ၆၆ နှစ်ရှိခဲ့တဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ကို လက်မှတ်ကလေး တစ်ချက်ထိုးရုံနဲ့ မပြေလည်ဘူး…
လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ – Yunnan Daily၊ Southern Weekend နှင့် South Wind သတင်းမဂ္ဂဇင်းတို့တွင် လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးပြီး The Time Weekly တွင် သတင်းထောက်ချုပ်အဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် World View မဂ္ဂဇင်း၏ သတင်းထောက်ချုပ် လုပ်ကိုင်နေပြီး ဂျာနယ်လစ်လုပ်သက် နှစ် ၂၀ ရှိသူဖြစ်သည်။ ပါမောက္ခ Yin Hongwei သည် တရုတ်-ဗီယက်နမ် နယ်စပ်၌ ကြီးပြင်းခဲ့သူဖြစ်ပြီး တရုတ်နှင့် အရှေ့တောင်အာရှ ဆက်ဆံရေးကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ လေ့လာခဲ့သူဖြစ်သည်။ သတင်းများ၊ ဆောင်းပါးများအတွက် လိုအပ်သော တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများကို အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများသို့ မကြာခဏသွားရောက်ပြီး လူကိုယ်တိုင် တွေ့ဆုံမေးမြန်းလေ့ ရှိသူဖြစ်သည်။
– See more at: http://news-eleven.com/politic/%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%A1%E1%80%93%E1%80%AD%E1%80%95%E1%81%B8%E1%80%AC%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%80-%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%AC%E1%82%8F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%84%E1%80%B6%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC-%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AD%E1%80%9E%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%90-%E1%80%A5%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%9F%E1%80%AC-%E1%80%9E%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%90%E1%80%86%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%BB%E1%80%96%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94#sthash.JLjteLXZ.dpuf
news.yahoo.com|By ROBIN McDOWELL
ဘယ်ကပုံကြီးလဲဟင် အွန်လိုင်းကတော့ ဟုတ်ဖူးထင်တယ်… အခုပဲ ရှာကြည့်တယ် တွေ့ ဖူးရယ်…
လယ်မြေတွေ ရောင်းဝယ်နေကြတဲ့ကိစ္စ မရောင်းကြဖို့ ဒေါ်စုမေတ္တာရပ်ခံ
“အကြွေးပိနေလို့ ဒီဝန်ကိုမခံနိုင်လို့ လွယ်လွယ်နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့မြေကို မရောင်းပါနဲ့လို့…
ကျမတို့နဲ့ ဆက်သွယ်ပါ… ဆက်သွယ်ပြီးတော့ အခက်အခဲဘယ်လိုရှိလည်းပြောပါ… ကျမသိတယ်နော်…
လိုက်ပြီးတော့ မြေတွေဝယ်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတာ၊ မရောင်းပါနဲ့ လွယ်လွယ်နဲ့ မရောင်းပါနဲ့…
လွယ်လွယ်နဲ့ လျှောက်ပြီးတော့ဝယ်နေတဲ့သူတွေဟာ သူတို့မှာ အကျိုးအမြတ်မရှိပဲနဲ့ လုပ်ပါ့မလား… အဲဒီ့ဟာလေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့ ချင့်ချင့်ချိန်ချိန်နဲ့ လုပ်ကြပါလို့ ကျမအနေနဲ့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်